जिबनमा सफलता चाहनुहुन्छ ? विहान उठेर गर्नुहोस् यी कामहरु !! - Sabal Post
जिबनमा सफलता चाहनुहुन्छ ? विहान उठेर गर्नुहोस् यी कामहरु !!
५. घरको मन्दिरमा पूजा गर्नुहोस् हरेक दिन बिहान घरमा आफूले स्थापना गरेको मन्दिरमा दियो बाल्नु अगरबत्ति जलाउनु उत्तम कार्य मानिन्छ । दियोको उज्यालो र अगरबत्तिको धुवाँले घरको वातावरणका नकारात्मक उर्जा खतम हुन्छ भने हरेक दिन विहान घरमा बत्ति बाल्नाले वास्तुका अनुसार पनि कयौं दोषहरु हट्छन् ।
स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै तीज मनाए पर्व रमाइलो…
अध्यक्षमा उमेदवारी दिने चर्चामा रहेका बाबुराम लामाको…
रोल्पामा कपास फिट्ने मेसिन पड्किँदा एकको मृत्यु,…